Yakaburitswa Kernel 4.12 | Linux Vakapindwa muropa
Isu takanga tazvizivisa kwemavhiki mashoma uye Yakazosvika. Iyo Linux kernel mune yayo vhezheni 4.12 yakatoburitswa mune yayo yekupedzisira vhezheni. Iyi yekuvandudza yeKernel inounza akawanda akawanda maficha maficha, achifunga kuti inyaya yakakosha kugadzirisa.
Kukura kwayo anga aine mavhezheni manomwe, shanduro umo iyi Kernel yakaedzwa uye yakagadziridzwa zvishoma nezvishoma. Zvaifungidzirwa kuti zvisere zvaizodiwa, asi pakupedzisira neshanduro nomwe zvave zvinopfuura zvakakwana kuvimbisa kugadzikana uye kushanda kwakanaka.
Mune iyi vhezheni itsva, Yakawedzera rutsigiro rweiyo itsva AMD Radeon RX Vega mifananidzo, mukuwedzera pakuwedzera kuenderana neNvidia GTX 1000 "Pascal". Uye zvakare, mashandiro eRAID ekuchengetedza masisitimu akagadziridzwa uye rutsigiro rwakawedzerwa kune "thermal" mutyairi weRaspberry Pi (iyo inongodzima komputa kana ichipisa kuti isadzivise kukuvara).
Uye zvakare, kuenderana kwave kuri nani ine EXT4, F2FS, uye XFS faira masisitimu, uchiwedzera pakati pezvimwe zvinhu rutsigiro neiyo system yekufona (ioct) GETFSMAPS. Chekupedzisira, madhiraivha akagadziridzwa, chengetedzo yakagadziridzwa, zviputi zvakawanikwa mushanduro dzapfuura zvakagadziriswa uye kugadzikana kwakagadziridzwa.
Izvi zvinoshandura kuKernel 4.12 mune epamberi kusvika nhasi, ine nhau dzakakosha padanho rekugadziriswa kweLTS, kunyangwe zvisiri izvo. Neichi chikonzero, vashandisi veLinux vane chokwadi chekukoshesa iyi yekuvandudza.
Kunyangwe iyi iri vhezheni yekupedzisira, haisati yanyatsogadzikana. Sekuchengetedza, ivo vanogadzira kernel havaioni seyakagadzikana kusvika iyo yekutanga kugadzirisa kuburitswa (4.12.1 mune iyi kesi). Nenzira iyi, vashandisi vanogona kunyatso kuyedza iyo system yezvikanganiso uye kwete kukanganisa kugadzikana kweanoshanda masisitimu. Uyezve, chinguva chakapfuura kuLinux wapotsa bug muKernel 4.8 uye yakave nemhedzisiro.
Nenzira iyi, unogona download uye edza nayo kuburikidza neako marekodhi kana Kernel.org, asi ini handikurudzire kuishandisa munzvimbo dzebasa kudzamara kwekutanga kugadziridzwa kubudiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kernel » Yakaburitswa Kernel 4.12
ExTiX 17.5 ikozvino inokutendera iwe kuti ugadzire chero kugovera kunoenderana neUbuntu 17.10